वीरेन्द्रनगरमा चुनावी सरगर्मी, ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउमा एमाले – Sajha Bisaunee
वीरेन्द्रनगरमा लगातार तेस्रो पटक विजय हासिल गर्दै ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउमा छ, एमाले । त्यसैले पनि एमालेले २०५४ को निर्वाचनमा मेयर बनिसकेका पुराना र अनुभवी नेता बालबाराम शर्मालाई यसपटक पनि मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरका साथै झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा कुशल नेतृत्व प्रदान गरिसकेका शर्मालाई उम्मेदवार बनाउँदा जीत सुनिश्चित हुने आंकलन एमालेका नेताहरूको छ ।
एमालेले नगरपालिकाको प्रमुख पदमा पुराना र अनुभवी नेता शर्मालाई उम्मेदवार बनाएर पुरानो साख जोगाउने रणनीति अपनाएको छ भने उप–प्रमुखमा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मोहनमाया ढकाललाई उम्मेदवार बनाएर चलाखी गरेको छ । पुराना नेता शर्माको अनुभव र युवा नेतृ ढकालको ऊर्जाको सन्तुलनका बीचबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समृद्धिको योजना पूरा हुने सन्देश एमालेले मतदाता माझ लैजान खोजेको देखिन्छ ।
साख जोगाउने चुनौती
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्रफल विगतको भन्दा फैलिएको छ । लाटीकोइली, उत्तरगंगा, जर्बुटा, रतु, गर्पन र गढी गाविस पनि वीरेन्द्रनगरमा गाभिएका छन् । यो २० वर्षको अन्तरालमा कयौं मतदाताले राजनीतिक दल परिवर्तन पनि गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य दलले पनि आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउँदै लगेका छन् । यस्तो अवस्थामा विगतका निर्वाचनको परिणामका आधारमा पार्टीको जीत सुनिश्चित भएको मूल्यांकन गर्नु एमालेका लागि घातक हुनसक्छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा एमालेलाई आफ्नो पुरानो साख जोगाउने चुनौती छ ।
वि.सं. २०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सुर्खेत जिल्लाको नतिजा कांग्रेसको पक्षमा थियो । ५० गाविस र एउटा नगरपालिकामध्ये ३१ गाविसमा अध्यक्ष र २९ जना उपाध्यक्षसहितको नतिजा कांग्रेसको पक्षमा हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर भने एमालेले जित्यो । जसमा यामलाल कँडेल मेयर र शिवप्रसाद उपाध्यायले उपमेयर जितेका थिए । यस्तै वि.सं.२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि वीरेन्द्रनगरको मेयरमा एमालेका बालाराम शर्मा र उपमेयरमा शिवप्रसाद उपाध्यायले जित हासिल गरे । उनै शर्मा वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट पुनः मेयर पदका उम्मेदवार बनेका छन् र एमाले विगतको सफलतालाई निरन्तरता दिँदै लगातार तेस्रो पटक वीरेन्द्रनगरमा विजय हासिल गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । यस पटक पनि विजय हासिल गरेमा वीरेन्द्रनगरमा एमालेले ह्याट्रिक गर्नेछ । यद्यपि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेलाई रोक्ने प्रयासमा छन् ।
पार्टीभित्रका साझा शर्मा
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि एमालेभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी थिए । यसरी आकांक्षा राख्नेहरूमा अधिकांश युवा नेताहरू थिए । तर ती सबैकाबीचबाट अन्ततः पुराना नेता बालाराम शर्मा उम्मेदवार बने । पार्टीभित्रका साझा व्यक्तिको रूपमा उनले परिचय बनाएका छन् । पार्टीभित्र दुई धारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि दुवै पक्षले स्वीकार्न सक्ने नेता हुन् शर्मा । यसपटक मेयरको उम्मेदवार बन्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
प्रदेश नं. ६ को सम्भावित राजधानीको रूपमा हेरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको छ । एमाले सुर्खेतका उपाध्यक्ष अमृत बिसी, युवा नेताहरू कुलमणि देवकोटा, ऋषि गिरी, निलकण्ठ खनाल, कानुन व्यवसायी कृष्णबहादुर हमाल लगायतका नेता उक्त पदका लागि आकांक्षी थिए । अन्ततः विगतदेखि पार्टीमा गरेको योगदानको कदर, जनतामाझको लोकप्रियता, राजनीतिमा दख्खल र सबैले स्वीकार्ने भएकाले शर्मालाई उम्मेदवार बनाइएको जनाइएको छ । शर्मा विगतमा पनि वीरेन्द्रनगरवासीले आफूलाई विश्वास गरेको र यसपटक पनि उक्त विश्वास कायमै रहेको बताउँछन् ।
सशक्त महिला नेतृ
मोहनमाया ढकाल सुर्खेतमा क्रियाशील महिला नेताहरूमाझ अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो । एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला कमिटी सुर्खेतकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनी सशक्त महिला नेतृ हुन् । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी ढकालसँग शैक्षिक योग्यताका साथै महिला र युवाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने क्षमता छ । यही योग्यतालाई मूल्यांकन गरेर उनलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको एमालेले जनाएको छ । उपमेयरको उम्मेदवार बन्न पाउनु आफ्ना लागि अवसर भएको बताउँदै ढकालले यसको सदुपयोग गर्ने बताइन् ।
प्रकाशित मितिः १८ बैशाख २०७४, सोमबार १५:१९